Maxaa Naloo Yiraahdaa Markhaatiyaasha Yehowah?
Ibraahim iyo Saarah
Magaca Markhaatiyaasha Yehowah dad badan baa u maleeya inuu yahay magac diin cusub. Haddaba 2,700 oo sano kahor Ilaaha keliya oo runta ah wuxuu addoommadiisii ugu yeeray “markhaatiyaashaydii.” (Ishacyaah 43:10-12) Sanadkii 1931 kahor waxaa naloo yaqaannay Ardayda Kitaabka. Maxaan u qaadannay magaca Markhaatiyaasha Yehowah?
Magacan wuxuu muujiyaa Ilaaheenna kuu yahay. Magaca Ilaahay oo ah Yehowah kumanyaal goor ayuu ku qoran yahay qoraalladii qadiimiga ahaa ee Kitaabka. Turjumaado badan baa magacan ku beddelay Rabbi ama Ilaah ama wax la mid ah. Haddaba Ilaaha runta ah magaciisa oo ah Yehowah wuxuu ogeysiiyay Muuse oo wuxuu ku yiri “kanu waa magacayga weligay.” Oo Muuse magacaas wuu isticmaalay. (Baxniintii 3:15; 17:15) Magacan aawadiis ayuu Yehowah iskaga soocay ilaahyada beenta ah oo dhan. Sharaf weyn bay inoo tahay inaan magaca Ilaahay oo quduuska ah sidanno.
Magacan wuxuu sharxaa shaqada aan qabanno. Xilliyadii hore dad badan uu Haabiil u horreeyay ayaa u markhaatifuray rumaysadkay u lahaayeen Yehowah. Qarniyadii la soo dhaafay Nuux, Ibraahim, Saarah, Muuse, Daaʼuud iyo kuwo kale ayaa ka mid noqday “markhaatiyaal badan oo sida daruur u weyn.” (Cibraaniyada 11:4–12:1) Sidii qof diyaar u ah inuu maxkamadda ugu markhaatifuro mid aan eed lahayn baan u goʼaansanay inaan runta Ilaahayaga ku saabsan sheegno.
Waxaannu ku dayanaynaa nebi Ciise. Kitaabku wuxuu Ciise ugu yeeraa “markhaatiga aaminka ah oo runta ah.” (Muujintii 3:14) Ciise wuxuu yiri inuu dadka garansiiyay magaca Ilaahay. Muunan joojin inuu “marag u furo runta” Ilaahay ku saabsan. (Yooxanaa 17:26; 18:37) Sidaas daraaddeed Kirishtaanka runta ah waa inay magaca Yehowah sitaan oona dadka ogeysiiyaan. Markhaatiyaasha Yehowah sidaa inay sameeyaan way ku dadaalaan.
Ardaydii Kitaabka maxay u qaateen magaca Markhaatiyaasha Yehowah?
Muddo intee ah ayuu Yehowah markhaatiyaal dunida ku lahaa?
Markhaatiga Yehowah oo ugu weyn waa kee?
Markaad la kulantid Markhaatiyaasha Yehowah isku day inaad barasho wanaagsan la yeelatid. Sababtay uga mid noqdeen Markhaatiyaasha Yehowah bal weyddii.
Wadaag Wadaag Maxaa Naloo Yiraahdaa Markhaatiyaasha Yehowah?